आजदेखि बढ्यो बैंकहरूको ब्याजदरः कुन बैंकको कति ? - Kantipath.com
आज १ गतेदेखि लागू हुने गरी बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरूले ब्याजदर परिवर्तन गरेका छन्। ‘बजेट होलिडे’ चलिरहँदा बजारमा पैसा कम भएको भन्दै बैंकहरूले ब्याजदर बढाएका हुन्। बैंकहरूले सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्दै निक्षेप तथा कर्जा दुवैको ब्याज बढाएका हुन्। ब्याजदर परिवर्तनसँगै पैसा जम्मा गर्नेले अर्थात् निक्षेपकर्तालाई फाइदा भएको छ भने बैंकबाट ऋण लिनेलाई ब्याजको भार थपिएको नेपालखबरमा दिपक भट्टले लेखेका छन्।
कुन बैंकको कति पुग्यो ब्याजदर ?
नबिल बैंकले साधारण निक्षेपमा ४ दशमलव २६ देखि ६ दशमलव २६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने भएको छ। मुद्दती निक्षेपमा पैसा राख्नेलाई बैंकले ६ दशमलव ५१ प्रतिशतदेखि ९ दशमलव २६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने बताएको छ। नबिलको बैंकको आधार दर ५ दशमलव ५२ प्रतिशत छ। यसअनुसार आधारदरमा १ दशमलव ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर कर्जाको ब्याज लिने बताएको छ। योसँगै ऋणीले कर्जामा ११ दशमलव ५२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिनुपर्ने हुनसक्छ।
हिमालयन बैंकले साधारण निक्षेपमा ४ दशमलव २५ प्रतिशतदेखि ६ दशमलव १५ प्रतिशतसम्म र मुद्दती निक्षेपमा ५ प्रतिशतदेखि ८ प्रतिशतसम्म दिने उल्लेख गरेको छ ।
प्रभु बैंकले साधारण निक्षेपमा ३ दशमलव २५ देखि ५ प्रतिशतसम्म र मुद्दती निक्षेपमा ८ दशमलव २५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने बताएको छ।
माछापुच्छ्रे बैंकले साधारण निक्षेपमा ३ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने सूचनामा उल्लेख गरेको छ। बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ८ दशमलव २५ प्रतिशतदेखि ८ दशमलव ७५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने जनाएको छ ।
सानिमा बैंकले साधारण निक्षेपमा ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने सूचना जारी गरेको छ। बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ७ देखि १० दशमलव ०१ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने जनाएको छ। बैंकको आधार दर ६ दशमलव १४ प्रतिशत छ। कर्जातर्फ बैंकले आधारदरमा ७ प्रतिशत ब्याज लिने जनाएको छ। जसअनुसार कर्जामा १३ दशमलव १४ प्रतिशतको ब्याजदर पर्नेछ।
सनराइज बैंकले साधारण बचतमा ५ दशमलव ०७ प्रतिशत ब्याज दिने बताएको छ। मुद्दती निक्षेपमा भने बैंकले ५ दशमलव ०७ प्रतिशतदेखि १० दशमलव ०७ प्रतिशतसम्म दिने सूचना बैंकले जारी गरेको छ। बैंकको आधार दर ७ प्रतिशत छ। कर्जाको ब्याजदर भने आधारदरमा ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर ब्याज लिने बताएको छ। यसअनुसार बैंकको कर्जाको ब्याज १३ प्रतिशतसम्म पर्नेछ।
एभरेष्ट बैंकले साधारण निक्षेपमा ३ दशमलव ६१ प्रतिशतदेखि ४ प्रतिशतसम्म र मुद्दती निक्षेपमा ६ दशमलव ५० प्रतिशतदेखि ८ दशमलव ६१ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने बताएको छ। बैंकको आधारदर ५ दशमलव ८५ प्रतिशत छ। बैंकले कर्जा ३ देखि ८ प्रतिशतसम्म आधार दर जोडेर कर्जा दिने बताएको छ। यसअनुसार बैंकको अधिकतम ब्याजदर १४ प्रतिशतसम्म पर्नेछ।
सेञ्चुरी बैंकले पनि साधारण बचतमा ४ दशमलव २५ प्रतिशतदेखि ६ दशमलव २५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने बताएको छ। मुद्दती निक्षेपमा भने बैंकले ८ प्रतिशतदेखि ९ दशमलव २५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने जनाएको छ। बैंकको आधारदर ७ दशमलव ५५ प्रतिशत छ। बैंकले कर्जामा आधारदरमा ४ दशशमलव ५० प्रतिशतदेखि ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम ब्याज लिने जनाएको छ। यसअनुसार बैंकको कर्जामा ब्याज १३ दशमलव ५५ प्रतिशतसम्म पर्नेछ।
एनएमबी बैंकले साधारण बचतमा ४ दशमलव ५२ प्रतिशतदेखि ६.५२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने भएको छ। मुद्दती निक्षेपमा बैंकले ९ दशमलव ०२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने बताएको छ।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले बचतमा २ देखि ४ दशमलव ५ प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपमा ७ दशमलव ५० प्रतिशतसम्म ब्याज दिने भएको छ।
एनसीसी बैंकले साधारण निक्षेपमा ४ दशमलव २६ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने बताएको छ। बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ९ दशमलव २६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने जनाएको छ।
सिभिल बैंकले साधारण निक्षेपमा ४ दशमलव २५ प्रतिशतदेखि ६ दशमलव २५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने बताएको छ। बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ७ दशमलव ५५ देखि ९ दशमलव २५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने सूचनामा उल्लेख गरेको छ।
प्राइम बैंकले साधारण निक्षेपमा ४ दशमलव ७६ देखि ५ दशमलव ७६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने उल्लेख गरेको छ। बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ८ देखि ९ दशमलव ७६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने जनाएको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आज जारी गरेको सूचनाअनुसार साधारण बचतमा ३ दशमलव ०६ प्रतिशतदेखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने भएको छ। बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ८ दशमलव ०६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिनेछ। बैंकको आधारदर ५ दशमलव ४१ प्रतिशत छ। बैंकले आधारदरमा असार महिनाको आधारमा १ देखि ३ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर कर्जाको ब्याज लिनेछ। यसअनुसार कर्जामा अधिकतम ब्याजदर ८ दशमलव ४१ प्रतिशत छ।
कृषि विकास बैंकले साधारण बचतमा ३ दशमलव ५ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने भएको छ। बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ८ दशमलव ६० प्रतिशतसम्म ब्याज दिने बताएको छ। बैंकको आधार दर ७ दशमलव १३ प्रतिशत छ। यसअनुसार २ देखि ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर कर्जाको ब्याजदर दिने बताएको छ। योअनुसार बैंकको कर्जा १२ दशमलव १३ प्रतिशतसम्म गर्नेछ।
नेपाल एसबीआई बैंकले साधारण निक्षेपमा ३ दशमलव ५५ प्रतिशत ब्याज दिने बताएको छ। मुद्दती निक्षेपमा भने एभरेष्ट बैंकले ४ दशमलव ५ प्रतिशतदेखि ८ दशमलव ५५ प्रतिशतसम्म दिने बैंकले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। बैंकको आधार दर ७ दशमलव ३७ प्रतिशत छ। कर्जामा सोही आधार दरमा १ दशमलव ५ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म जोडेर कर्जा दिने बताएको छ। यसअनुसार कर्जा लिनेलाई १२ दशमलव ३७ प्रतिशतसम्म ब्याज पर्नेछ।
Previous Previous post: चीनबाट आज आइपुग्दै ४४ लाख डोज भेरोसेल खोप
Next Next post: नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले माग्यो करारमा कर्मचारी
महालक्ष्मी विकास बैंकको ऋण तिरेर धितो फिर्ता माग्दा २५ तोला सुन नक्कली दिएपछि…
१५ महिनाभित्र बिमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी चार गुणा बढ्ने
वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गर्दै लक्ष्मी बैंक, ३८ प्रतिशत बोनस सेयर दिने
बारामा ७९ सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज
नेपाल राष्ट्र बैंकले पाँच अर्ब तरलता प्रशोचन गर्ने
व्यवसायीको गुनासो: करको नाममा नगरपालिकाको लुट !